Tababare Klopp Oo Farta Ku Fiiqay Kooxda Ugu Halista Ugu Wareega 16-ka Champions League » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Tababare Klopp Oo Farta Ku Fiiqay Kooxda Ugu Halista Ugu Wareega 16-ka Champions League
Maamulaha naadiga kubada cagta Liverpool, ee Jurgen Klopp, ayaa wuxuu aaminsan yahay in kooxdiisa ay noqon doonto mida halist badan, hadii ay sii wadaa bandhigooda fiican ee afka hore ama weerarka.
Reds, ayaa waxay dhaliysay 32 gool Sagaal kulan oo ay dheeleen, waxaana uu guul daro ugu dambeysay bishii lasoo dhaafay ee October, waxaana ka badisay naadiga Tottenham, iyadoona haatan usoo baxay wareega 16-ka ee Champions League.
Isagoo la hadlayay wariyaasha xalay Arbaco ahayd, ayaa waxa uu Klopp, uu sheegay in Kooxdiisa Liverpool, ay tahay koox awood badan, islamarkaana sameyn karta, wax kasta oo suura gal ah.
Wuxuu yiri: “Waxa aan nahay kuwa ugu halista badan wareega 16-ka ee Champions League, hadii aan sii wadno bandhigeeda fiican ee afka hore ee goosha, waxaana ku kalsoon nahay inaan sameyn karno wax kasta.
Klopp ayaa ku faanaya qaar kamid ah, gooldhaliyaasha ugu wanaagsan tartanka Champions League, waxaana kamid ah: Coutinho, Sadio Mane, Roberto Firimino, Maxamed Saalax iyo kuwa kale, wuxuuna sheegayaa inuu ku duuli doono